ဆယ်ကျော်သက်လေးလို နုနယ်ပြီး လှနေတဲ့ အေးမြတ်သူ – XB Media Myanmar
သရုပ်ဆောင် မင်းသမီးချောလေးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အေးမြတ်သူ ဟာဆိုရင် သရုပ်ဆောင် မှုအပိုင်းမှာ အပိုအလိုမရှိတဲ့ သရုပ်ဆောင်ကွက်တွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဖျော်ဖြေတင်ဆင်ပေးခဲ့ တဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုများစွာကို ရရှိထားခဲ့ရတာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေရဲ့ အားပေးချစ်ခင်မှုများစွာကို ရရှိထားခဲ့ရတဲ့ အေးမြတ်သူ ရဲ့ ပွဲတက် ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ဒီတစ်ခါမှာတော့ အေးမြတ်သူက မန္တလေးမြို့မှ Bella ပွဲကို လူငယ်ဆန်တဲ့ ဂါဝန်လေးနဲ့ အမိုက်စား ပွဲတက်ခဲ့တာပါ။
အေးမွတျသူ က ” မနေ့ က ..ခုလိုခြိနျလေးမှာ Bella ရဲ့ ST⭐R TOUR အစီစဉျလေး နဲ့ မန်တလေးမွို့ ကMingalar Mandalay မှာ ခစြျရသူတှနေဲ့ ဆုံတှေ့ခှငျတှရေ…. တူတူဓါတျပုံ တှ ရိုကျခဲ့ရတာ ပြောျစရာကွီးရှငျ့ ။ဒီနေ့လညျး ….မိတ်ထလာမွို့ က ခစြျရသူတှနေဲ့ ဆုံခဲ့ရပါတယျ. .. မိတ်ထီလာမွို့ က ခစြျရသူတှနေဲ့ ပုံလေးတှေ မနကျဖွနျတငျပေးမယျနောျ ….❤❤❤ မနကျ ..၁၄ ရကျနေ့ မှာ .. မုံရှာမွို့ က ခစြျရတဲ့ . …Bella ကို ခစြျတဲ့ ST⭐RS တှေ နဲ့ တူတူဓါတျပုံလေးေ တှ ရိုကျကွမယျနောျ …. Bella ကို သုံးစှဲရငျး ခစြျရသူတှေ အားလုံးST⭐R လေး တှေ ဖွဈကွပါစေ ရှငျ့ …..⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐ဝတျစုံလေးစီစဉျပေးတဲ့ …ဒီဇိုငျနာ ဌေးဌေးတငျ ဓါတျဖမျးပေးတဲ့ …မန်တလေး က ဓါတျဆရာဇောျမြိုးထကျကြေးဇူးပါရှငျ့ ……” ဆိုပွီးသူမရဲ့ ဖေ့ဈဘှတျပေါျမှာ ရေးထားပါတယျ။
ပရိသတ်ကြီးလည်း အေးမြတ်သူ ရဲ့ ပွဲတက်ပုံရိပ်ကလေးတွေကို ပရိသတ်တွေ သဘောကျ လိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။ အချိန်ပေးပြီး ဖတ်ရှုပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီကို မိုမိုလေးမှ ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါတယ်။
Photo;Zaw myo htet
ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ရွှေထူးရဲ့ Show ပွဲမှာ ပါဝင်သီချင်းဆို ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ ရွှေမှုံရတီ